Kufamba kweUS: Akanyadziswa zvakanyanya nehurukuro dzeCOVID-19 dzekuyamura dzichipera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Kufamba kweUS: Akanyadziswa zvakanyanya nehurukuro dzeCOVID-19 dzekuyamura dzichipera
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
US Kufamba Association Mutungamiri uye CEO Roger Dow vakaburitsa chirevo chinotevera paWhite House ichipedza nhaurirano dzekuyamura coronavirus:
“Vanhu vekuAmerica vanoshanda nesimba vanorarama nekufamba nekushanya havagone kumirira kusvika sarudzo dzapera. Ichokwadi ndechekuti mabhizinesi madiki muhomwe dzese dzeAmerica ari kuvhara-vaida zororo mwedzi yapfuura, iyo yakajekeswa vhiki svondo.
“Nemamiriyoni emaAmerican ari kutambura, zvinofungidzirwa kusiririsa kupedzisa kutaurirana kwekuyamura. Dhata nyowani kubva kuTurkey Economics inoratidza kuti, pasina rubatsiro rwekukurumidza, 50% yemabasa ese anotsigirwa ekufamba acharasika munaZvita-kurasikirwa kwekuwedzera kwemabasa emamiriyoni e1.3. Sezvo kufamba kuchitsigira 11% yemabasa ese epamberi pehutachiona, hazvigoneke kuti US itarisire kugadzirisa hupfumi hwenyika pasina chinangwa chekubatsira.
"Pachinzvimbo chevashandi vekuAmerica vanofamba, isu takaora moyo zvakanyanya zvekuti Congress nehutungamiriri vakatadza kuwana chibvumirano cherubatsiro rweindasitiri iyi, kunyangwe paine humbowo hwakajeka hwekukuvara kuri kuwedzera.
"US Travel icharamba ichikurudzira zororo remamirioni evashandi veindasitiri yekufamba uye mabhizinesi madiki vanoita zvakanyanya kuhupfumi hwedu."